Accueil > Gazetin'ny nosy > Rajoelina sy Rajaonarimampianina: Manao vazaha mody miady sa… ?
Rajoelina sy Rajaonarimampianina: Manao vazaha mody miady sa… ?
Maro ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no mifanontany hoe “tena tafasara-dalana ve sa manao vazaha mody miady amin’ny resaka politika ny filoha ankehitriny, Rajaonarimmapianiona sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina”?
RAha ny hita imasom-bahoaka mantsy, hoy ny mpanara-maso dia tena tsy mifampikoso-maso mihitsy ny andaniny sy ny ankilany. Marina fa samy tsy misy mbola tena nanonona anarana mivantana fa ny vontoatin’ny teny ambaran’izy ireo dia mifanindrom-paingotra avokoa.
Na ireny fotoana nisehoan’ny andaniny sy ny ankilany nitondra famelabelarana momba ny “VIna fisandratana 2030” sy ny “Iem” ireny aza, dia efa mahasarika ny fisaina’ny maro, hoy ny mpanara-maso. Nifanakaiky ary samy mifototra amin’ny “emergence” avokoa. Samy mametraka ho zava-dehibe ny famokarana herin’aratra, indrindra fa ny herin’aratra azo havaozina. Samy nanipika ny maha-antoky ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny harena voajanahary eto izay hoe ananatsika betsaka.
Fa ny mahalasa fisainana dia ny nahatonga ny filoha Rajaonarimampianina nanosika ny mpikambana ao anatin’ny governemanta maromaro sy ireo mpanohana ny fitondrana HVm hiaka-tsehatra tamin’ny haino aman-jery isan-karazany mba hamely ny hevitra nohazavain’i Andry Rajoelina momba ny “Iem”.
Fa nandritra ny efa-taona tsy nahenoana an’i Andry Rajoelina naneho hevitra politika koa anefa dia saika tsy nitsahatra nanakiana sy naneho fanoherana ny zavatra ataon’ny fitondrana Hvm ny mpiara-adia amin’i Andry Rajoelina ao amin’ny Mapar, na depiote na olom-pirenena mpiara-dia aminy.
Fa ny mahavariana koa dia ny tetik’asa nitondran’i Andry Rajoelina famelabelarana ary nahazoan’i Mialy Rajoelina anaram-boninahitra ambony mihitsy aty Afrika, dia ny momba ny “ethanol”.
Io “Ethanol” io no isan’ny fototra iorena’ny vinan’asa voizin’ny Mapar amin’izao fotoana. Tsy azo hadinoina anefa fa efa nanangana rafitra manokana momba azy io amin’ny maha-tetik’asan’ny filohampirenena Rajaonarimampianina azy io ny fitondrana Hvm. Ny tena mahazendana amin’izy io dia olona iray ihany no miara-dia amin’i Andry Rajoelina sy amin’i Hery Rajaonarimampianina amin’izy io dia i Bienvenu Rajaonson. Tamin’ny 7 oktobra 2015 Tokoa mantsy no nivoaka ny didim-panjakana laharana 1343 avy amin’ny filohampirenena Rajaoanrimampianina, izay manendry an-dRAjaonson Bienvenu ho tompon’andraikitra voalohany amin’ilay rafitra mikarakara ny famokarana “Ethanol” amin’ny maha-tetik’asan’ny filohampirenena azy, ary tafiditra ho isan’ny mpanolotsaina ny filoha Rajaonarimampianina koa izy.
Tsy mbola nofonan’ny filoha Rajaonarimampianina anefa ny didim-panjakana nanendreny azy dia efa isan’ny tana-kavanan’i Andry Rajoelina amin’io tetik’asa io koa i Bienvenu Rajaonson.
Efa aty aoriana be vao re fa nofoanaa izay didim-panjakana izay, ka mahalasa eritreritra.
Amin’ny lafiny iray dia manana endrika fivadiham-pitokisana ihany izany satria tetik’asa nanankinan’ny filoha Rajaonarimampianina an-dRajaonson Bienvenu no nentiny any amin’i Andry Rajoelina. Iza no afaka hiantoka fa rahampitso na rafakampitso dia tsy hivadika amin’i Andry Rajoelina ka hitondra an’io Tetikasa “Ethanol” io any an-kafa indray izy? HAtramin’ny foto-diany tany ampita nitondra an’io tetyik’asa “Ethanol” io no mampiahiahy ny mpanara-maso hoe “vola avy aiza?”
Etsy ankilany, misy mpanara-maso manamaraika koa fa ny olona akaiky an’I Andry Rajoelina nitondra an’i Bienvenu Rajaonson tany tany aminy koa no tena tsy azo itokisana raha izao tranga izao. Dia misy ny manamarika hoe “toa resaky ny samy “franc maçon” koa ity raharaha ity sataria mifandray tendro ao anatin’io “Franc maçon” io ny maromaro amin-dry zalahy mpinamanamana ireo.